I-china cypB quantitative disc feeder Ukukhiqiza nefektri Izinsiza kusebenza zeChengxin Vibration
ICypB chungechunge le-quantitative disc feeder luhlobo lwemishini yokuphakela yevolumu ngokudla okuqhubekayo. Ifakwe ekwehlisweni kwamadivayisi wesitoreji njengesilo, isililo nomgqomo wamabhakede.
ICypB chungechunge le-quantitative disc feeder luhlobo lwemishini yokuphakela yevolumu enokuphakelwa okuqhubekayo. Ifakwe ekwehlisweni kwamadivayisi wesitoreji njengesilo, isililo nomgqomo wamabhakede. Kuphoqelelwa indlela yokusebenza ye-disc feeder ngaphansi kwamandla adonsela phansi impahla, futhi ifakwa kudivayisi elandelayo ngokuqhubekayo nangokulinganayo. Lapho iyeka ukusebenza, ingadlala futhi indima yokukhiya imigqomo. Kuyinqubo eqhubekayo yokukhiqiza imishini eyisihluthulelo.
I-cypB series quantitative disc feeder wuhlobo olusha lwe-disc feeder enokwethenjelwa okuphezulu, ukusebenza kahle okuphezulu nokonga amandla, okwenzelwe nokwenziwa yinkampani yethu ngesisekelo sokugaya nokumunca ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bamanye amazwe nokuhlanganisa nesimo sangempela eChina. Kuthuthuke ngokwengeziwe futhi kunengqondo esakhiweni. Inezici ezilandelayo:
1. Imishini yamukela isakhiwo sokusekelwa esijikelezayo esikhulu, esinamandla amakhulu wokuthwala nokusebenza okuzinzile.
2. Indlela yokudlulisa isebenzisa ukudluliswa kwegiya elinzima lezinyo, elinokusebenza okuphezulu kokudlulisa kanye nempilo ende yokusebenza. Isinciphisi nezimoto zifakwe ngaphansi kwendawo yediski, futhi isakhiwo sonke semishini sihlangene.
3. Imishini yamukela isakhiwo sokufaka uphawu esiyingqayizivele, izingxenye zokudlulisa zifakwe kahle futhi zivalwe, futhi akukho zindaba zangaphandle ezingena ezingxenyeni zokugcoba, ukuze kuqinisekiswe ukuthi okokusebenza kungasebenza ngaphandle kwephutha.
4. Umthethonqubo wejubane lokuguqula imvamisa usebenzisa imodi yokulawula ukuguqulwa kwemvamisa ye-vector, ene-torque enkulu yokushayela, ibanga lokulungiswa okubanzi nokunemba kokulawula okuphezulu.
5. Isakhiwo esivalwe ngokuphelele samukelwa ngenqubo yokudlulisa impahla, evumela ukuphathwa kwenhlanzeko esizeni futhi yakha indawo yokusebenza enethezekile.
6. Isakhiwo semodemu nesinokutholakaliswa samukelwa umzimba womshini nomkhono wokuvala isikhala ukubona ukuqaqa okusheshayo nokuhlangana esizeni. Isikhundla sokufakwa kwesitolo singakhethwa ngokuthanda ngaphakathi kwama-degree ayi-180, okwenza kube lula kakhulu ukusisebenzisa.
Ukusebenza kwediski ububanzi Okufakwayo t / h Ihlukanisa umkhawulokudonsa womkhawulo mm
CYPBφ2500 30 kuya ku-300 ≤1000
CYPBφ2800 40 kuya ku-400 ≤1200
I-CYPBφ3200 60 kuya ku-600 ≤1500
Langaphambilini Ibhande, okuphakelayo kwamaketanga
Olandelayo: Isiphakeli esidlidliza isisindo esiphindwe kabili se-Czg
Isondli se-Disc esivaliwe
Umkhiqizi We-Disc feeder
Isithombe se-Disc feeder
Intengo Ye-Disc feeder
Ubuningi be-Disc feeder
Okuphakelayo Disc Disc